SHIH APSO DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Shih Apso Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Lhasa Apso / Shih Tzu eeyaha isku dhafan ee isku dhafan
Pogi eeyga badbaadada Shih Apso ee 2 sano jir ah— 'Isagu waa qof aad u jecel, ilaalin iyo khariba. Isaguba waa qof caqli badan isla markaana si dhakhso leh u barto tabaha cusub. Xoogaa madax adag oo neceb inuu keli ku ahaado cillad.
Shih Apso ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Shih Tzu iyo Lhasa Apso . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Butler a badbaadiyey Lhasa Apso iyo Shih Tzu qas 5 sano jir
Brindle the Shih Apso (Lhasa Apso / Shih Tzu mix) 2 asbuuc jir — eeg Brindle kor ka muuqata ka dib markii jaakaddiisa midabbada bedeshay
Brindle, Shih Apso (Lhasa Apso / Shih Tzu mix) 4 asbuuc — eeg Brindle kor ka muuqata ka dib markii jaakaddiisa midabbada bedeshay
Brindle Shih Apso (Lhasa Apso / Shih Tzu mix) qiyaastii 3 bilood
Brindle Shih Apso (Lhasa Apso / Shih Tzu mix) oo qiyaastii 1 sano jir ah jaakaddiisu waxay hadda bilaabaysaa inay muujiso calaamadaha midabbada beddelaya.
Brindle Shih Apso oo 18-bilood jir ah (Lhasa Apso / Shih Tzu mix) —a aamin ama ha rumaysan, Brindle wuxuu ku dhashay britle ee midabaynta, markaa magaca. Isbeddelka midabka jubbadda ayaa caan ku ah nooca Lhasa Apso. Hoos ka daawo sawirro dheeraad ah oo ku saabsan Brindle. Wuxuu ka mid yahay toddobada cunug ee qashinka ka soo baxa. Biyo xidheenku waa heerka caadiga ah ee Lhasa — dhogorta kareemka, wejiga cawlan. Siraha wuxuu ahaa seddex-madow-madow / bunni / cad Shih-Tzu. Waxaa jiray seddex arday sida Brindle, mid madow oo saafi ah oo laabta cadceedu ka muuqato olol cad, iyo seddex midab. Afar dumar ah, mid lab ah. Miisaannada ayaa ka socda 15 rodol illaa 22 rodol. Brindle wuxuu ahaa cunugga ugu weyn qashinka. Mulkiilihiisa ayaa kaftamaya, Waxa uu u muuqdaa inuu yahay mid caqabad ku ah noocyada. Wuxuu had iyo jeer u dhaqmaa si ka sii badan sidii bisad. Dhakhtarka xoolaha iyo taranka ayaa ku adkaysanaya in aan haysto eey. Waxay sameysaa 'woof.' Isagu waa cabsi-u eg. Wuxuu si quruxsan u soo ceshan doonaa sida Goldens ee aan lahaa, laakiin markaa wuxuu doonayaa inuu dilo. MA AH eey biyo ah, laakiin wuxuu jecel yahay qubayska iyo qurxinta. Waa ku faraxsanahay in lagu buuqay. '
Wuxuu kaloo leeyahay, Dabeecadda 'Eyda cunugga' ayaa si wanaagsan u dhaaftay 9-10 bilood. Guri jabinta ayaa sifiican u dhacday. Bilaha 4, heerka shilku sifiican ayuu hoos ugu dhacay. Waxaan ku qaatay tababarka sanduuqa eeyadayda, taas oo ka caawisa LOT. Si kastaba ha noqotee, nadiifiye rooga waa saaxiibkaa. Sida Barbara Bush ay tilmaamtay, eeyaha iyo roogaggu waa iskudhaf xun.
Si kastaba ha noqotee, dhibaatooyin ayaan kala kulmay 4 bilood. Pup wuxuu toosi lahaa 4 subaxnimo wuxuuna sameyn doonaa buuq. Isaga kaxeeyey. Waxba. Waxay noqotay inuu kelidii cidlo ahaa. Arrintaas ayaa loo qabtay, markaa sariir buu nala qaatay. Waxaad la hadlaysaa nin sariir cabirkiisu le'eg yahay si eygu boos ugu helo. Isagu wax fikrad ah kama haysto waxa ay u egtahay sariirta eyga. Waxaa jirta xoogaa suurtagal ah in aan ka soo gudubnay xariijintii laga koolkooliyey oo la kharribay ... -) Hadda wuxuu nala wadaajiyaa sanduuqa isagoo nala baxaya dhowr saacadood, wuxuuna u jiheystaa sariirta hoosteeda haddii uu maqlo albaabka qolka. Waa inaan u isticmaalaa xaaqin si aan sariirta uga hoos baxo ... ma ahan sawir qurxoon .... EY aad u caqli badan eey. Waxaan u maleynayaa inay taasi la socoto shakhsiyaadka argagaxisada iyo ilaalada. '
Hoos waxaa ku yaal sawirro isaga u eg. Ma ogaan doontid inuu yahay isla eeyga. Isbedelka midabka ayaa hada dhameystiran. Isagu gebi ahaanba waa kareem-midab, wejiga cirridka / gadhka. Dhogor aad u wanaagsan, oo leh u janjeera jajab. Waxaan u isticmaalaa 'detangler' si aan u xakameeyo, oo waa inaan u hagaajiyaa maalin kasta. Shakhsiyan hubaal waa isku dhafka labada nooc. Waxaan rabaa inaad fariisto dhabtaada oo aad ilaaliso alaabtaada!
'Weli waad arki kartaa qaar ka mid ah calaamadaha bunni. Wali wuxuu leeyahay timo ilaalin mugdi ah hadaan u daayo inuu dheeraado. Dagaalku wuxuu u dhexeeyaa aad u qurux badan, timo dhaadheer iyo dhibaatooyinka isku dheelitirka. '
Coco the Lhasa Apso / Shih Tzu mix (Shih Apso) eey yar oo jirta 9 toddobaad
Coco isku darka Lhasa Apso / Shih Tzu (Shih Apso) 5 bilood jir
Enzo the Shih Apso oo 1½ sano jir ah— Waxaan ka helnay hadiyad saaxiib ah, oo ah milkiilaha aabihiis Lhasa Apso aabe! Hooyadiis waa daahir Shih Tzu. Enzo wuxuu leeyahay muuqaal iyo dabeecad Lhasa xitaa waxaan isweydiiyey hadii hooyadiis runti ahayd Shih Tzu… LOL. Waa nin masayr badan oo xoogaa dabeecad leh isla markaana dagaal badan, laakiin waan jeclahay sida uu yahay! '
Enzo the Shih Apso eey yar oo jira 3 bilood
Eeg tusaalooyin badan oo Shih Apso ah
Shih Apso Sawirada
kabaha isbaanishka ee cad iyo bunni
australia bulldog eey iib ah
ceelka dibiga eey isku darsadaan eeyaha
yorkie iyo maltese ayaa la iibinayaa
madow shih tzu maltese mix